Lgbt Imidlalo: I Ultimate Gay, Lesbian Kwaye Transsexual Gaming Ndawo
Wamkelekile kwi-LGBT Imidlalo!
Molweni apho: enkosi kuba ethabatha ixesha elizayo kwaye ndwendwela nathi ku-LGBT Imidlalo: njengoko unga mhlawumbi zibalisa, sibe a passionate iqela abantu ukuba care kakhulu malunga hooking kuwe phezulu kunye finest omdala imidlalo yaziwa umntu, kwaye sibe kwi ishishini ka-interactive amava kunye lesbian, gay, bisexual kwaye transgender indlela., Sikholelwa ukuba ikamva le omdala entertainment ishishini kakhulu kakhulu oza kugxininisa kwaye jonga kwenzeka ntoni xa uthatha inkukhu sexy isiqulatho kwi-i-interactive-bume: abantu ufuna ukwazi umnxeba i-ingongoma kwaye khetha kwezabo adventure xa oko iza zinokuphathwa LGBT ngesondo iiseshoni! Ukuba ke apho siya kuza, kwaye siphinda-abanekratshi kwaye okhethekileyo uku kwazi ukuba sininike finest omdala isiqulatho kwazeke ukuba umntu ukuba awusoze yima jerking ngaphandle phezu., Ngoko ke, ngaphandle ngakumbi ado, makhe bathethe malunga yintoni yenza LGBT Imidlalo ekhethekileyo kwaye kutheni kufuneka ithathele ingqalelo oku lakho lokuqala kwizibuko umnxeba nanini na xa ufuna squeeze yakho hog. Ndicinga ukuba ke ekhuselekileyo ukuze kuthi ukuba kunye ngoko ke, abaninzi iinketho phandle phaya, thina anayithathela ngenene kwafuneka cofa i-imvulophu kwaye bonisa ngokwethu kuba kunzima ukusebenza ngokupheleleyo eyodwa kunye zethu indlela mature XXX interactive amava!
Ukuba u ekunene: ukuba ufuna umqondiso ukuya kwi-LGBT Imidlalo, ungakwenza oko ngokupheleleyo simahla. Isizathu sokuba sithe sayenza lento ngoba sifuna njengoko abaninzi gamers njengoko kunokwenzeka ukuba isampuli zethu wares kwaye bona kanye kanye yintoni thina anayithathela onayo kokuya kwi apha. Ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, thina anayithathela zilawulwe ukuya kuqokelela isiqingatha yezigidi amalungu – kodwa ke akukho ndawo kufutshane kwabaninzi njengoko siqwalasela hoping ukuba ngenye imini kuba! Kunye olungenangxaki bomlinganiso, sibe nako bayathetha ngcono kunye notyalomali zethu sponsors, apho ngokulandelelanayo sele kuvunyelwe kuthi ukugcina zethu projekti njenge free ukudlala imeko-bume., Thina anayithathela balingwe ukugcina le ndawo njengoko ethical kangangoko kunokwenzeka mayela ezemali kunye gameplay kakhulu – kukho akukho imathiriyali okuninzi ukuba uyakwazi ukuthenga phezu kwezinye gamers ukuze banike ngokwakho ngcono stats, nzulu inkqubela okanye nantoni na, ngolohlobo. Phezulu kwaye umzantsi LGBT Imidlalo kukuba ukuba ufuna ukuba abe lilungu apha kwaye uyakuthanda yintoni kokuya kwi, nisolko phantsi akukho koxinzelelo kwaphela yakho engagqibekangacomment ukuze kuphunyezwe ukuba end. Siphinda-hoping ukumisela umzekelo xa oko iza omdala gaming kule ndawo: i ngokukhawuleza nabanye abantu kwaye studios kuwela umgca, i-bhetele!
Thina care kakhulu malunga nokudala elikhulu kuluntu apha, nto leyo kutheni sino a inani imisebenzi efumanekayo ukuba ufuna ukuncokola nabanye abantu. Nkqu ukuba ukhe ubene hayi super keen kwi ukuba uhlobo nto, iindaba ezimnandi kukuba LGBT Imidlalo kuzakuvumela ukudala i-akhawunti apha kwaye sebenzisa zonke izibonelelo ukuba kuza kunye ezininzi amalungu! Mhlawumbi eyona nto ekuhlaleni-Phinda, enikezela ezininzi iinkcukacha kwi-30+ imidlalo thina ngoku kuba wethu kuvimba., Unako kanjalo yiya kwi esemthethweni Discord iseva ukuba ufuna uncedo, okanye koko kunika ingxelo kwi-ababhekisi phambili ngoko ke sinako ukwazi ukuba ucinga ntoni onke amagama eencwadi sino kwaye ngubani efanelekileyo kuthi ukwenza ukuqhubela phambili. Oku ikamva omdala gaming ukuba sibe ujonge phambili kwaye ucinga ukuba makhulu loluntu, kwaye imisebenzi ezifumanekayo kubo, i-ngcono. LGBT ikratshi ngu big umxholo apha kakhulu, ngoko ke musa woyikayo ukufumana kwi esemthethweni iiforam kwaye wabelane yakho arthur kirkland – thina anayithathela kokuba amawaka abantu benze oku sele!
A elokugqibela kwi-LGBT Imidlalo
Ndiyathemba ukuba anayithathela zilawulwe ukuqinisekisa lowo ufunda ya kwikhulu, ukuba siphinda-eyona folks jikelele xa oko iza olu hlobo nto, sibe kwi ngenene stencils ukuze ukwazi ukuyizisa kuni hottest gay and lesbian imidlalo jikelele. Kukho plenty ka-transsexual media kakhulu, ngoko ke ukuba uziva ngathi interactive fun _umxholo jikelele nayiphi na kwezi concepts, le yindawo ukufumana i-ihlale ngexesha elingelilo lokuhlala isixa-mali ezi zinto ke ekunene phezulu yakho alley. Ke ukuba i-absolute blast ukusebenza apha kuba ngoko ke ixesha elide, kwaye iqela ngu ujonge phambili ezininzi ngaphezu kweminyaka impumelelo! Kuza ngomhla kwaye ukungena namhlanje.